Shina : Voaloton’ny Benzene, Akora Simika Miteraka Homamiadana, Ny Rano fisotro Tao Lanzhou · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Avrily 2014 23:33 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Svenska, Swahili, Español, 日本語, polski, English
Nampitandrina ny mponina tao Lanzhou ny mpitondra ao an-toerana mba tsy hisotro ny rano avy amin'ny paompy noho ny fahalotoana tafahoatran'ny rano fisotro, izay nampisahotaka ny olona hividy rano anaty tavoahangy tany amin'ireo tsena lehibe ao an-tanàna.
Nisy ‘benzene’ be dia be, ranoka simika tena mahatonga homamiadana, hita tany anatin'ny famatsian-drano fisotro ao an-tanàna, araka ny nolazain'ny governemanta ao an-toerana. Tamin'ny fotoana iray dia tonga amin'ny fetra mampidi-doza ny habetsaky ny benzene hita tany amin'ny ranon'ny paompy satria nihoatra avo 20 heny amin'ny tokony ho izy.
Miankina tanteraka amin'ny Renirano Mavo i Lanzhou, tanàna indostrialy any avaratra andrefan'i Shina, amin'ny famatsian-dranony. Taona vitsivitsy lasa izay no nisian'ny firohotana fampiasam-bola goavana tao amin'io tanàna izay misy mponina 4 tapitrisa io, izay nanaovan'ny fanjakana hetsika isankarazany mba hampakarana ny toe-karena any amin'ny faritra andrefana mbola andalam-pandrosoana.
Nifandrombaka tamin'ny rano anaty tavoahangy ny mponina tao Lanzhou rehefa nampitandrina ny tsy hisotroana ny rano amin'ny paompy ny mpitondra ao an-toerana. Sary avy amin'ni Wangyangyagn de Xiaopengyou ao amin'ny Sina Weibo .
Notantarain'i Veolia, orinasa Frantsay momba ny fikarakarana rano, mpamatsy rano voalohany an'i Lanzhou, tao amin'ny Xinhua, masoivohom-baovao tantanan'ny fanjakana, fa mety avy amin'ilay orinasa ao an-toerana mpitrandraka sy mpanadio solika io rano maloto io.
Ao amin'ny Sina Weibo toy ny Twitter, ity hafatra ity no nosoratan'ny trano filazam-baovaon'ny faritanin'i Gansu, izay i Lanzhou no renivohitra :
Tsy azon'ny mponina ao Lanzhou sotroina ny rano amin'ny paompy mandritra ny 24 ora manaraka. Nanomboka tamin'ny 3 ora marainan'ny 11 Aprily dia nasian'i Lanzhou Veolia arina mpanadio ny sinibe fanangonana ny rano mba hitrohana ireo raha organika ka handevonana ny benzene. Ny androtr'io ihany tamin'ny 11 ora maraina dia najanona ny asan'ilay orinasa any avaratra mba hitrohana ny benzene nandoto ny rano. Fa nandritra izany fotoana izany dia ny teknikan'ny fanafoanana ny tsindry no niantoka ny famatsian-drano an-drenivohitra fa ho ajanona kosa ny any amin'ny distrikan'i Gaoping sy ireo faritra lavitra. Hahena ny fampiasana rano any amin'ny orinasa. Tsy mbola azo sotroina ny rano ao anatin'ny 24 ora, nefa misy ihany karazana rano tsy voaloto.
Notaterin'ny haino aman-jery tao an-toerana fa nitaraina ny mponin'i Lanzhou hoe nisy fofona ratsy ny rano tamin'ny paompy tamin'ny volana lasa, nefa nambaran'ireo mpiasan'ny lapan'ny tanàna fa nanara-penitra ny kalitaon'ny rano. Nantsoina hoe ” mpanely tsaho isam-baravarana” sady efa “karakaraina” araka ny lalàna ireo mponina sasany izay nanaparitaka ny teny momba ny fahalotoan'ny rano tamin'izany fotoana izany.
Mampisongadina ny fihazakazahan'ny fahalotoana izay mianjady amin'ny firenena ny olan'ny rano any Lanzhou na dia efa manomboka mahazo vahana aza ny fikatrhana ho fiarovana ny tontolo iainana any Shina. Tamin'ny 2013, nisy mpitoraka bilaogy malaza sady mpanao gazety taloha namorona fanentanana anaty aterineto izay iantsoany ny mpisera mba haka sary ireo renirano voaloto any amin'ny tanàna nihaviany.
Iray amin'ireo lohahevitra telo noresahina be tao amin'ny Weibo tamin'ny Zoma alina ny fahalotoan'ny rano ao Lanzhou.
Nanome ity fanavaozam-baovao ity tao amin'ny kaontiny ofisialy ao amin'ny Weibo ny vaovaon'i Beijing (The Beijing news):
【Tsy misy intsony ny rano maloto. Omen'ny fanjakana maimaim-poana ny rano fisotro madio】 Nofoanan'ny ekipan'ny vonjy taitran'ny tanànan'i Lanzhou sy nasainy notapahana ny loharano mahatonga ilay loto. Nanangonana rano amin'ny tavoahangy sy rano amin'ny siny avy amin'ny faritra manodidina ireo departemanta voakasika ka ny departemantan'ny fitantanana sy ireo fikambanana maro samy hafa no itondra izany ho an'ny mponina.
Notsikerain'ireo mpisera amin'ny Weibo ny governemanta tamin'ny nanomezany alàlana orinasa vahiny hitantana ny famatsian-dranon'ny tanàna. Nitaraina ilay mpanakanto mpampihomehy Zhang Gang :
Miantso ny mpitondra an'i Lanzhou aho mba hanangona rano fisotro madio ary hanome izany maimaim-poana ho an'ny mponina ! Mila valiny marina sy mahitsy izany! Henatra ny hoe rano maloto tsy tapaka no ho an'ny sarambabem-bahoaka. Azontsika inoana ve ny famatsian-drano tantanan'ny vahiny ? Iza no nanapa-kevitra hivarotra ny famatsian-drano amin'ny Frantsay ? Iza no nanao izany ? Ary iza no nanasonia izany ?
Izao no nosoratan'i Beijing Chuzi, mpisera amin'ny Weibo miaraka amin'ireo mpanara-dia azy efa ho antsasaka tapitrisa :
Io no zavatra faran'izay adaladala indrindra nataon'ny governemanta. Nomeny ho an'ny vahiny [ ny sampan-draharahan'ny fitantanana ny rano] raha tokony ho ny fanjakana no hitantana izany. Ahiako ho nisy olona nahazo tombontsoa tamin'io fifandraharahana io.